Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda S.Ogadenya ee Denmarka oo kala qaybgalay jaaliyaadka Falastiin shirweynahoodii
Jaaliyadda S.Ogadenya ee Denmarka oo kala qaybgalay jaaliyaadka Falastiin shirweynahoodii
Maanta oy taariikhdu tahay 28/04/2012, ayaa waxaa lagu qabtay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen, kalfadhigii 10aad ee Jaaliyaadka Falasdhiin ee qaarada Yurub. Shirkan oy kasoo qayb galeen in kabadan Toban Kun oo qof kana kala yimid dhamaan qaarada Yurub ayaa sirasmi ah loogu martiqaaday Jaaliyada Soomaalida Ogadenya ee Denmark.
Wafti balaadhan oo kasocday Jaaliyada S.Ogadenya ee Denmark ayaa si fiican loogu soo dhaweeyay madashii uu kalfadhigu kasocday oo runtii ay buux dhaafiyeen dad aad utiro badan ayna kamuuqatay wajiyadooda qiiro iyo xamaasad baaxad leh, waxaana goobta uu shirku kasocday hadheeyay dareen halgan iyo gobanimadoon.
Fursadan taariikhiga ah oy nasiib u yeelatay Jaaliyada S.Ogadenya ayaa laga gaadhay dhamaan ajendeyaashii laga lahaa oy ugu muhiimsanayd in la gaadhsiiyo qadiyadda shacabka S.Ogadenya iyo dhibaatada uu gumaysiga Itobiya ku hayo dadka shacabka ah wufuudii iyo madaxdii heerka sare ahayd ee kasoo qaybgalay shirkan, kuwaasoo ay kamid ahaayeen wasiiro kasocday wadamada UK, Tunis, Masar iyo waliba saxafiyiin magacdheer kuleh bulshada caalamka sida saxafiyada wayn ee ree UK Mrs. Louren Booth.
Dhanka kale waxaa usuura gashay waftigii Jaaliyada S.Ogadenya inay u qaybbiyaan ka qayb-galayaashii shirka waraaqo iyo muuqaalo katurjumaya xaalada dhabta ah ee kajirta Ogadenya een cidina maanta mooganayn, waxaa kaloo nasiib wanaag uu waftiga Jaaliyadu sigooni gooni ah ula kulmeen dhamaan wufuudii martida u,ahayd shirka waxayna gudoonsiiyeen warbixino faah faahsan oo kusaabsan dacatiyad kadhanka ah xuquuqda aadamaha ee kajirta Ogadenya.